स्लो भइरहेको आफ्नो मोबाइललाई यसरी फास्ट बनाउनुहोस्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
स्लो भइरहेको आफ्नो मोबाइललाई यसरी फास्ट बनाउनुहोस्
काठमाडौं । मोबाइलमा अहिले सबैभन्दा आकर्षक र सबैको हातमा हुने भनेको स्मार्ट फोन हो । स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, तर विस्तारै स्लो हुने र ह्याङ्ग हुने समस्या आएपछि स्मार्ट फोन नै झन्झटिलो महसुस हुन थाल्छ ।
स्मार्ट फोन ढिलो हुने कारणहरु :
-अत्यधिक एप्स डाउनलोड गर्नु
-फोनको मेमोरी अत्यधिक प्रयोग हुनु
अत्यन्तै आवश्यक हुने एप्स मात्र डाउनलोड गर्नुहोस् । गेमका धेरै एप्लिकेसन डाउनलोड नगर्नुहोस्। मोबाइल तात्ने अवस्थामा पुग्ने गरि नचलाउनुहोस् । वाट्सएप, म्यासेन्जर, आइएमओ आदि मा आदान प्रदान गरेका फोटो तथा भिडियो मोबाइलमा जम्मा भएर बस्छन्। जसले गर्दा मोबाइलको मेमोरी धेरै खान्छ र मोबाइल ढिलो हुने, स्पेस नहुने आदि हुन्छ।
त्यसैले ती एप्सको सेटिंगमा गएर आदानप्रदान गरेका फोटो तथा भिडियोहरु मोबाइलमा जम्मा नगर्ने अप्सन छान्नुहोस् । तपाईंले मोबाइलमा डाउनलोड गरेका कुराहरु, मोबाइलबाट डिलिट गरेपनि मोबाइलमा हुने डाउनलोड एप्लिकेसनमा गएर सबै बसेको हुन्छ ।
त्यसैले डाउनलोड गरेका कुरा हटाउँदा, त्यो डाउनलोड एप्लिकेसनबाट पनि हटाउनुहोस्।